Liyini Ikusasa Lokuqoqwa Kwemininingwane Ephansi? | Martech Zone
Yize amaklayenti nabahlinzeki becaphuna ngokufanayo ukuqoqwa kwedatha engenziwanga njengomthombo okhulayo wokuqonda kwabathengi, cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zithi ngeke zisebenzise idatha yokwenziwa eminyakeni emibili kusukela manje. Ukutholwa kuvela ocwaningweni olusha olwenziwe ngu GfK kanye ne-Institute for International Research (IIR) phakathi kwamakhasimende nabahlinzeki bezocwaningo abangaphezu kuka-700.
Kuyini Ukuqoqwa Kwedatha Okungenzi lutho?
Ukuqoqwa kwedatha okungahleliwe ukuqoqwa kwemininingwane yabathengi ngokuziphatha kwabo nokusebenzisana kwabo ngaphandle kokwazisa noma ukucela imvume yomthengi. Eqinisweni, abathengi abaningi abaqapheli nokuthi ingakanani idatha ethathwa ngempela, nokuthi isetshenziswa kanjani noma yabiwa kanjani.
Izibonelo zokuqoqwa kwedatha okwenziwe ngesiphequluli noma idivayisi yeselula eqopha indawo okuyo. Noma kungenzeka ukuthi uchofoze okulungile lapho ubuzwa okokuqala ukuthi ngabe insiza ingakuqapha yini, le divayisi iqopha ukuma kwakho kusuka lapho kuye phambili.
Njengoba abathengi bekhathala ukuthi ubumfihlo babo busetshenziswa ngezindlela abebengazicabangi, ukuvimbela izikhangiso nezinketho zokuphequlula okuyimfihlo ziya ngokuya zanda. Eqinisweni, iMozilla isanda kumemezela ukuthi iFirefox iqinise imodi yayo yokuphequlula yangasese nge ukuvimba ama-tracker avela eceleni. Lokhu kungahle kuqhubeke ngaphambi kwemithetho kahulumeni - ebheke ukuvikela abathengi nedatha yabo ngokuya ngokuya.
Imiphumela evela ku- Ikusasa Lemininingwane kwembula nokuthi:
Ukulinganiselwa kwesabelomali kukhona futhi kuzohlala kuyinkinga ehamba phambili yenhlangano kumakhasimende nabaphakeli; kepha okunye ukukhathazeka okuhlukahlukene - kusuka ekuhlanganisweni kwedatha kuye ekukhathazekeni okulawula - kubonwa kucishe kulingana ngokulingana.
Cishe amakhasimende ayisithupha kwabayishumi nabahlinzeki bathi bazobe besenza cwaninga usebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula kanye / noma iziphequluli zeselula eminyakeni emibili kusukela manje - abahlinzeki maningi amathuba okuthi bathi sebevele bayakwenza.
Isivinini sokukhiqiza ukuqonda ukuthinta izinqumo zebhizinisi kuphinde kubonakale njengegebe elibalulekile embonini namuhla, okuthola isibili phakathi kwamakhasimende (i-17%) nesithathu kwabaphakeli (i-15%).
Cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zabamukeli ithe izindlela zabo ezibaluleke kakhulu zokuqoqa idatha eminyakeni emibili kusukela manje kuzoba ukuqoqwa kwemininingwane engenziwanga yize izingxenye ezimbili kwezintathu zingenzi lutho namuhla. Izingxenye ezimbili kwezintathu zezinkampani ezenza ucwaningo ezimakethe azilindeli ukuthi zizoqoqa imininingwane eminyakeni emibili.
Ukuqoqwa Kwedatha Okungahleliwe: Kuhle noma Kubi?
Ukuze abathengisi bayeke ukuphazamisa futhi baqale ukwabelana ngeminikelo efanelekile, noma iceliwe kubathengi, abathengisi kumele babambe idatha. Imininingwane kufanele inembe ngokumangazayo futhi itholakale ngesikhathi sangempela. Ukunemba kuhlinzekwa ngokuqinisekisa idatha kusuka emithonjeni eminingi. Isikhathi sangempela ngeke senzeke ngokuhlola noma ngamaqembu esithathu… kufanele kwenzeke ngasikhathi sinye nokuziphatha kwabathengi.
Mhlawumbe abathengisi bazilethele lokhu - ukuqoqa ama-terabyte wedatha kumakhasimende, kepha bangalokothi bakusebenzise ngokunikela ngokunikela ngomuzwa ongcono womsebenzisi. Abathengi badlisiwe, bazizwa nje besetshenziswa futhi behlukunyezwa njengoba idatha yabo ithengwa, ithengiswa futhi yabiwa phakathi kwamathani emithombo egaxela ukukhwabanisa kubo.
Ukwesaba kwami ​​ukuthi, ngaphandle kokuqoqwa kwedatha, izindonga ziqala ukukhuphuka. Amabhizinisi ngeke afune ukukhipha okuqukethwe kwamahhala, amathuluzi nezinhlelo zokusebenza ukuthuthukisa umuzwa wabathengi ngoba abakwazi ukukhothoza noma iyiphi idatha engasebenziseka kuyo. Ngabe empeleni sifuna ukuya kulolo hlangothi? Angiqiniseki ukuthi siyakwenza… kodwa angikwazi ukusola ukumelana nalokhu.
Tags: I-GFKI-IIRIsikhungo Socwaningo Lomhlaba Wonkeucwaningo lwemaketheidatha yokwenziwaukuqoqwa kwedatha engenziwangaukulinganisa okwenziwaUkuhlola
Isu Lakho le-B2B Kufanele Lifake I-Ecommerce
Abathengi Bancamela Ukukhetha Nokusebenzelana Nakho ... ngisho neVidiyo